Eocene fauna: ụdị ndị bụ isi, njirimara na mmalite | Netwọk Mgbasa Ozi
La Eocene epoch bụ otu n'ime ndị kpụrụ oge Paleogene nke Oge Cenozoic. N'oge a, enwere nnukwu mgbanwe site na nyocha ala na usoro ndu, ebe ọ bụ na e guzobere nnukwu ugwu site na nkwekọrịta kọntinent. Mmegharị a nke kọntinent mere ka Eocene fauna enwere ike mepụta ya ma gbasịa ya n'ọtụtụ dịgasị.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara na mmepe niile nke anụ ọhịa Eocene.
3.3 Eocene Fauna: Na-akpụ akpụ na Mmụ Anụmanụ
Oge Eocene ọ dị ihe dị ka nde afọ iri abụọ na atọ. E kesara ya na afọ 4 nke akara akara ụfọdụ, mgbanwe ihu igwe na nke ọdịmma. A na-ahụta ya dịka oge mgbanwe nke ụwa gbanwere na mpaghara mgbanwe ebe ọ bụ na e mere ka nnukwu mpaghara Pangea mebie. Nke a bụ otu esi guzobe kọntinent ndị anyị maara ha taa.
Enwere ọtụtụ mgbanwe ihu igwe dị oke mkpa ebe ọ bụ na e nwere ụfọdụ ihe megidere Paleogene. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ihe omume Azolla nke kpatara mmụba na ọnọdụ gburugburu ebe obibi gburugburu ụwa n'ụzọ ọ kere ọnọdụ ndị ọzọ nke ndị dị ndụ ga-emegharị. Enwekwara mgbanwe ọzọ na mgbanwe mgbanwe okpomọkụ nke kpatara mbelata na ya. Ihe omume ihu igwe abụọ butere ihe ndị dị ndụ biri na mbara ụwa n'oge a.
Nnụnụ bụ otu n'ime otu ndị nwere nnukwu mgbanwe n'oge a. Ọtụtụ n'ime ndị bi na mbara ala ahụ bụ anụ ọjọọ na-eri anụ buru ibu. Mkpokọta nke oke ala Pangea bụ ihe kpatara ma ọ bụ gbasaa ọtụtụ ụdị anụmanụ na osisi.
Anyị ga-enyocha etu ahịhịa na anụmanụ nke Eocene siri malite.
N'ime oge a, ọnọdụ gburugburu ụwa nke mbara ụwa a kwere ka mmepe nke ọtụtụ ụdị osisi na anụmanụ. Ọ bụ oge ndụ dịgasị iche iche bara ụba n'ihi ekele na ihu igwe.
Inyocha ahịhịa anyị hụrụ na ọ bụ mgbanwe dị ezigbo anya. Mgbe okpomọkụ dị ọkụ ma dị mmiri mmiri na mbido Eocene, ụwa nwere oke ọhịa na oke ọhịa. E nwere ihe akaebe na-ekwu na okporo osisi ndị ahụ nwekwara oke ọhịa n'oge a. Njikọ njikọ nke gbochiri ụkọ ihe ọkụkụ bụ mbara igwe dị n'ime ime kọntinent.
Osisi ndị mepụtara n'oge a bụ metasequoia na ezinụlọ cupresaceae. Ndị nke a bụ ndị so na otu egwuregwu mmega ahụ, ebe ha bụ conifers. Ọ bụ otu ụdị osisi dịgasị iche iche dịka ha nwere ike ịbụ obere na nnukwu. Akwụkwọ ya yiri akpịrịkpa ma hazie ya nke ọma. Offọdụ n’ime ha na-ahapụ ihe ka mma.
Ọ bụ ebe a ka anyị lekwasịrị anya na anụmanụ nke Eocene. Anyị nwere ike ịsị na anụmanụ dị n'ọtụtụ oge n'oge a. Otu ìgwè nke mammals na nnụnụ bụ ndị kachasị pụta ìhè. Anyị ga-enyocha otu niile.
Ọ nọgidere na-eme ka ihe dị iche iche dị iche iche na gburugburu mmiri. Enwere otutu mollusks, n'etiti nke gastropods, bivalves, echinoderms na cnidarians pụta. Arthropods malitekwara n'oge a, na ndanda bụ ndị nnọchi anya kachasị.
Nnụnụ bụ ụdị ndị ahụ mepụtara kachasị ekele maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mma. Speciesfọdụ ụdị dị ka anụ ọjọọ nyere ìgwè abụọ nke ihe dị ndụ ma na-atụ egwu n'oge ahụ. Speciesfọdụ n’ime nnụnụ ndị kacha bụrụ ndị tolitere ma nwekwaa ụba bụ: Phorusrhacidae, Gastornis na penguins ahụ. Anyị ga-akọwa njirimara nke ọ bụla n'ime ha:
Phorusrhacidae: Ọ bụ otu ìgwè nke nnụnụ ndị bụ isi njiri mara ha buru ibu. Specfọdụ ihe nlele ruru mita atọ n'ịdị elu. Enwere ike ikwenye ya site n'ọtụtụ akwụkwọ ndekọ ihe ndị dị adị site n'oge a. N'oge na-adịbeghị anya, enwere ike ịchọta okpokoro isi nke anụmanụ ndị a iji mee ka ha mata nke ọma. Akụkụ ọzọ nke nku bụ ikike iji ofufe. Agbanyeghị, ọ rụpụtara ya ngwa ngwa. A na-eche na ha ruru ọsọ ruru kilomita 3 kwa elekere. Ha bụ anụ na-eri anụ nke obere anụmanụ, gụnyere ụfọdụ ndị na-enye ara.
Gastornis: A maara ya dị ka nnụnụ ụjọ. Nke a bụ n'ihi na ha yiri egwu. N'etiti njirimara ya kachasị ama, anyị na-ahụ nnukwu nha ya, ya na ụfọdụ ihe ruru mita 2 ma karịa kilogram 100. Isi ukwu ha na mkpụmkpụ, nke siri ike mere ka ha bụrụ ihe na-eyi egwu. Onu ugba ahu yiri nke icheoku nwere taa. Ike mara mma dị egwu ma rụọ ọrụ ijide anụ oriri ha. N’agbanyeghi na o feghi, o nwere oke oso.
Penguins: Ọ bụ otu bass na-adịghị efe efe. Otu a adịgidela ruo ugbu a ma dị na Antarctica na ọdụ ndịda. N'oge a kwenyere na ha bi na kọntinent South America. A maara nke a site na ụfọdụ ihe ochie ndị enwetara na saịtị ahụ. Enwere ụfọdụ ihe atụ nke ruru 1.5 yana ndị ọzọ pere mpe.
Eocene Fauna: Na-akpụ akpụ na Mmụ Anụmanụ
Anụ ndị na-akpụ akpụ dị adị ma mepụta ngwa ngwa. Ndị nke kachasị dịrị bụ nnukwu agwọ, na-eru ihe karịrị 10 mita n'ogologo na ụfọdụ ụdị.
Banyere ndị na-enye ara ara, otu a bịara dịwanye iche, ọkachasị ndị mmụọ, anụ ụlọ na ụfọdụ anụ na-eri anụ. Ka anyị nyochaa nke ọ bụla n'ime ha:
Na-akwado: Njirimara ya bụ na ọ nwere ike ịkwaga na-akwado na njedebe nke mkpịsị aka ya. N’ebe a anyị nwere ezì na kamel, ehi, atụrụ na ewu.
Ndị Cetaceans: ha mepụtara na gburugburu mmiri ma nwee ụdị dị ka archaeocetos. Ndị a bụ ndị mbụ malitere ịzụlite àgwà nke mere ka ha nwee ike ime mgbanwe maka ndụ mmiri.
Ambulocetids: ha bụ whale mbụ dị na mbara ụwa a. Ha nwere ogologo karịa mita 3 ma ibu ha nwere ike ịbụ kilogram 120. O nwere ọdịdị yiri ya na agụ iyi ọ bụ ezie na aka ya dị ogologo. Aka ndị a na-arụ dị ka ntù iji na-agagharị. Nri ha bụ anụ na-eri anụ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ Eocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Eocene fauna